IGAD oo War kasoo saartay in Midowga Afrika dhexdhexaadiyo Saamileyda Siyaasadda Soomaliya - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Urur Goboleedka IGAD ayaa taageeray Qorshaha Midowga Afrika ku doonayo inuu ku dhexdhexaadiyo Saamileyda Siyaasadda Somaaliya, kadib khilaafkii ka dhashay Doorashada iyo muddo kororsiga.
War-saxaafadeed degdega oo maanta kasoo baxay IGAD ayaa lagu soo dhoweeyay Soo jeedinta in Midowga Afrika uu dib u soo nooleeyo wadahadalkii u dhaxeeyay Saamileyda Siyaasadda Soomaaliya si loo xaliyo khilaafka ismari waaga siyaasadeed.
IGAD ayaa ku dhiiragelisay dhammaan daneenayaasha siyaasadda Soomaaliya inay fursad siiyan hindisahan cusub si loo galo wadahadal waxtar leh oo wax dhisaya ayna niyad wanaagsan la yimaadaan.
Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo Golaha Ammaanka Midowga Afrika ee Berri kulan gaara ka yeelanayo xaaladda Soomaaliya oo ku jirta qalalaase siyaasadeed iyo mid Amni, taasoo ka dhalatay muddo kororsi uu ku dhaqaaqay madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Previous articleXildhibaan Odowaa oo weerar Afka ah ku qaaday Qoorqoor. “Wuxuu Xamar u joogaa inuu Farmajo kala shaqeeyo..”
Next articleMagacyada Dhalinyarro ku dhintay Hoobiyeyaashii lagu weerarray Madaxtooyada Soomaaliya